Oyena Mvelisi weNdibano yoMfanekiso wePCB – PCBFuture-SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Eyona Prototype yoMvelisi weNdibano yePCB-PCBFuture
Yintoni iPrototype PCB ibandla?
Indibano yePrototype yePCB ithetha ukuveliswa kovavanyo lwebhodi yesekethe eprintiweyo phambi kokuveliswa kobuninzi, isetyenziswa ikakhulu phambi kwenkqubo yovavanyo yebhetshi encinci apho iinjineli zombane zagqiba uyilo lwemveliso kunye noyilo lwePCB.
Indibano yePrototype PCB inamagama amaninzi.Amagama odla ngokuweva ngala: iprototypes ye-PCB, i-PCBA prototype assembly, indibano yesampulu ye-PCB, njl. njl.Oku kuya kunceda ukuqinisekiswa komgangatho, ukuqinisekiswa kunye nokuvavanya imveliso, ukufumana iimpazamo, kunye nokuhlaziya uyilo.Ngokuqhelekileyo, phambi kokuveliswa kobuninzi, iprojekthi ye-elektroniki iya kufuna ukuphindaphinda kwe-2-3 yendibano ye-PCB yomzekelo ukuqinisekisa ukuba yonke into isebenza kakuhle.
Iinjineli zePCBFuture ngokukhawuleza nangeendleko ezifanelekileyo zidibanisa iiprototypes zayo zombane kuyo yonke inkqubo yokuqinisekisa uyilo.Ukuqinisekisa ukuba uyilo lwemveliso luyahlangabezana neemfuno, sikholisa ukusebenzisa i-5pcs okanye i-10pcs yovavanyo lwendibano yeprototype.
Kutheni sifuna inkonzo yendibano yeprototype PCB?
Ukuze siqinisekise ukuba iimveliso zombane ezintsha zigqibelele phambi kokuba zithengiswe, kuya kufuneka sivavanye iiprototypes phambi kokuveliswa kobuninzi.Ukuveliswa kwe-PCB kunye nendibano ye-PCB yinkqubo eyimfuneko yokuvelisa i-prototype turnkey PCB.Indibano yePrototype yePCB yeyenjongo yovavanyo olusebenzayo, ukuze iinjineli zibe noyilo olulolona hlobo kwaye zilungise ezinye iibugs.Ngamanye amaxesha kunokufuneka amaxesha angama-2-3, ngoko ke ukufumana umenzi wendibano ye-elektroniki ethembekileyo kubaluleke kakhulu.
Isizathu sokuba kutheni sifuna inkonzo yendibano ye-PCB yomzekelo, kuba kufuneka uphonononge ngokukhawuleza isiphumo somsebenzi woyilo lwePCB.Kufuneka ugqibezele inkqubo yokuhlanganisa ukwenza oku.I-PCBFuture inokwenza indibano yomfuziselo we-PCB yakho endlwini.Ngoko ke, unokuqonda ngokukhawuleza ukuba iprototype ye-pcb edibeneyo isebenza njani.Singabonelela ngeenkonzo zendibano ye-PCB elungiselelweyo, kunye nemveliso yethu ekumgangatho ophezulu kunye nokukhangela izinto.Siza kusebenzisa uyilo lwakho olulodwa lwePCB ukulungiselela inkqubo yendibano kwaye siqhube uvavanyo olubanzi ukuqinisekisa ukuba ziyahlangabezana neemfuno zakho zokusebenza ezichanekileyo.Singabonelela ngeseti epheleleyo yendibano ye-PCB yeprototype kwimowudi yokumisa enye, iya kongela ixesha elininzi, imali kunye nengxaki.
Yintoni inkonzo yethu ye-Prototype PCB Assembly?
I-PCBFuture ilungile kwinkonzo yendibano yocingo eprintiweyo.Ngobuchwephesha bethu bobuchwephesha bokuthengisela, iiNjineli zokuphatha ze-SMT kunye neengcaphephe zecandelo sinokubonelela ngendibano yePCB enexabiso eliphantsi, inkqubo yokudityaniswa ebhetyebhetye kakhulu kunye nenkonzo yokujika ngokukhawuleza.Ngezantsi luluhlu lwezinye iinkonzo esizinikezelayo:
Indawo enyeUkwenziwa kunye nokudibanisa iPCB
Indibano yePCB etshiphu
Iinkonzo zendibano yePrototype PCB (ubungakanani ukusuka ku-1 ukuya kwiibhodi ezingama-25)
TurnkeyUkujika ngokukhawuleza kwindibano yePCB
Ukudityaniswa kwe-SMT enye okanye kabini
Indibano ye-Thru-hole, i-EMS PCB, kunye nendibano yeprototype exutyiweyo
Inkonzo eyenzelwe wena nesemgangathweni
Kutheni abathengi bethanda inkonzo yethu yendibano ye-PCB?
1. I-PCBFuture inokufumana i-PCB yakho kunye ne-PCBA prototype kuwe ngokukhawuleza ngeveki okanye iintsuku, ngokuqhelekileyo ixesha lethu lokukhokela ziiveki ezi-3, kungekhona iinyanga.Wonke umsebenzi wethu uya kukunceda ukuba ufumane iiprototypes zendibano ye-PCB emva koko uvavanye ngokukhawuleza, oku kuthetha ukuba unokuthengisa iimveliso zakho ze-elektroniki ngokukhawuleza.
2. Sinobukho obuphezulu bamacandelo, kwaye siseka ubudlelwane bexesha elide kunye nentsebenziswano nabagunyazisiweyo abanolwazi lwamacandelo abasasazi kunye nabavelisi.Ngaphezu koko, siye sabela injineli ekhethekileyo enoxanduva lweprojekthi nganye kwaye sinokubonelela ngeenketho zendibano eziguquguqukayo kubathengi bethu nabo.
3. Inkonzo yendibano ekhawulezayo yeprototype yePCB inokugcina iprototype kunye nomjikelo wovavanyo.Kwaye kuyakunceda ukuba wenze iimveliso zakho zize kwimarike ngokukhawuleza kunabo bakhuphisana nabo, kwaye yehlise iindleko too.Ihlabathi libaleka ngokukhawuleza nanini na ngaphambili.Amaxesha amaninzi inkampani eqala ukuthengisa ifumana isabelo sengonyama kwingeniso.Kwa-PCBFuture, sifuna ukukhapha nawe kwaye sinikezele ngemveliso ekhawulezayo ye-PCB yemveliso kunye nenkonzo yebhodi yebhodi yombane.
4. I-PCBFuture ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokunciphisa iindleko zendibano ye-PCB yakho.Sisebenza nabanikezeli becandelo abaninzi abaziwayo ukuze sikwazi ukuthenga awona macandelo afikelelekayo eprojekthi yakho ngomgangatho olungileyo.Sikwabonelela ngeendlela ezininzi zokupakisha ezingabizi kakhulu, kunye neteknoloji ephezulu kakhulu yokukhetha enye, onokugcina imali eninzi.
Uzifumana njani iindleko zendibano ekhawulezayo ye-PCB ngaphambi kokubeka iodolo?
Ukuba ufuna isicatshulwa sendibano ye-PCB yomzekelo, nceda usithumelele iifayile ezilandelayosales@pcbfuture.com, uya kufumana i-quote epheleleyo kwiiyure ze-48 (Ngokuqhelekileyo kwiiyure ze-24).
IBhili yeMathiriyeli (uLuhlu lweBOM)
Amanani kunye nezinye iimfuno ezikhethekileyo zobuchwepheshe ukuba ziyimfuneko
I-PCBFuture ifanelekile ukulawula inkqubo epheleleyo ye-PCB ye-turnkey, ebandakanya ukufunwa kwawo onke amacandelo (i-PCB kunye namacandelo), indibano ye-PCB, ulawulo lomgangatho, uvavanyo olusebenzayo kunye nokuhanjiswa.
I-FQA yoMfanekiso weNdibano yePCB:
1. Ngaba i-PCBFuture ingabonelela ngenkonzo yendibano ye-PCB ye-turnkey ekhawulezayo?
2. Ungayigqiba ixesha elingakanani i-odolo ye-PCB ye-turnkey?
Ngokuqhelekileyo, siya kufuna malunga neeveki ezi-3-4 zokukhokela
3. Ngaba uyavuma ukudibanisa iibhodi ezingenziwanga yi-PCBFuture?
Sinikezela ngobuqhetseba bePCB, ukufunwa kwamalungu kunye nendibano yePCB ngendlela eqhubekayo negudileyo ukonga ixesha nemali yabathengi bethu.
Ukuba uneemveliso zakho PCB, kufuneka nje iinkonzo zethu indibano PCB, kwaye sisenako bagqibelele ukwenza oko, kufuneka usithumelele ibhodi yakho.
4. Uyabonelela ngendibano yeprototype (ubungakanani obuphantsi)?
Ewe.Ngolwazi oluthe kratya nceda ujonge iprototype yethu yephepha lendibano yePCB.
5. Ingaba ixabiso lakho elicatshulweyo libandakanya ntoni?
Siza kukubonelela ngamaxabiso endibano yePCB.Ixabiso lendibano yePCB ibandakanya izixhobo, istensile yesolder kunye nendibano yabasebenzi yokulayisha amacandelo.Iingcaphuno zethu zeqhosha lokujika zikwabonisa amaxabiso ecandelo njengoko kubonisiwe.Asihlawulisi mali zokuseta okanye i-NRE yokuhlanganisa.
6. Zeziphi iifayile kunye namaxwebhu owacelayo iiodolo zam PCBA?
Sifuna iifayile zeGerber, idatha yeCentroid kunye neBOM yeeodolo zakho zePCBA.Njengoko sele uyifakile iodolo yakho yePCB kuthi, eneneni ufuna kuphela ukuthumela ezimbini zokugqibela ukuba iifayile zakho zePCB Gerber zibandakanya umaleko wesilika, umkhondo wobhedu kunye nentlama yesolder.Ukuba iifayile zakho ze-PCB Gerber ziphosakele nayiphi na imigangatho emithathu ekhankanywe apha ngasentla, nceda uyithumele kwakhona, njengoko esi sesona sicelo sisezantsi se-PCBA.Ngezona ziphumo zinokwenzeka, nceda usithumelele imizobo yendibano, imiyalelo kunye neefoto ukuthintela nakuphi na ukubekwa kwamalungu ngendlela engaqondakaliyo, nangona oku kungafunwa luninzi lwabahlanganisi.
7. Ngaba indibano yakho ye-RoHS iyahambelana?
Ewe, sinokusingatha ulwakhiwo olungahoyiyo.Kodwa sikwanikezela ngeenkonzo zePCBA ezikhokelayo.
8. Ungafumana iinxalenye ezithile zendibano yam?
Ewe.Olu qheliselo lubizwa ngokuba yi-turn-key.Unganikezela ngamanye amalungu, kwaye sifumana amanye amalungu egameni lakho.Siza kucela imvume yakho ngayo nayiphi na into engaqinisekanga ecaleni kwethu.Kwimeko apho iinxalenye ezinqumlayo okanye ezifuna ukutshintshwa, siyakucela kwakhona imvume yakho yokugqibela.